iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #411 by Colonelwing
Combat Digital Simulator World (DCS World) kuyinto yempi digital free-to-play, wagxila ezempi izindiza sekulingisa. Kuhlanganisa FREE TF-51D futhi i Su-25T attack izindiza.
DCS World 2 kudinga DCS: Nevada Test and Training Ibanga (NTTR) endaweni eyayicekeleke module, ohlanganisa contiguous emoyeni kanye emhlabathini isikhala ngobukhulu etholakalayo sokuthula imisebenzi yezempi emhlabeni free. I NTTR indawo kuhlanganisa eyenziwe izinhlelo emoyeni wezokuvikela, airbases mbumbulu, futhi target amabanga eziningana. Le NTTR lalisetshenziselwa for testing yenuzi. Namuhla, inezinhlobo Red Flag kanye neminye imicikilisho lempi zihlanganisa amazwe evela emhlabeni wonke. I NTTR kumephu DCS World 2 kuhlanganisa Nellis AFB, Creech AFB, McCarran International Airport nesiboshwa esidumileyo Groom Lake AFB (aka Area 51). Leli balazwe sihlanganisa emzini Las Vegas, McCarran International Airport, futhi Hoover Dam.
Bheka wena wonke at Nellis AFB for Operation Red Flag Gentelmen!
I M-2000C is a multi-indima, French-eklanyelwe, 4th isizukulwane fighter. Lase yakhelwe 1970s njengoba fighter engasindi futhi okweqa 600 M-2000C izindiza sekwakhiwe. I M-2000C is a fighter single-injini kuthanda ephansi isethi delta wing kungabikho umsila ovundlile. It inekhono elihle kakhulu unikezwa kwesimo sayo esikhululekile futhi fly-by-wire control flight uhlelo. I M-2000C sihlanganisa multi-mode RDI radar okungukuthi kokulandela anekhono kanye nemigomo sihehe at ngaphesheya amabanga ezibukwayo. Ngaphezu kokuhlanganyela nezinye izindiza ne inganono nezikhali ezicitshwayo, M-2000C kungaba Batibandzakanya emhlabathini ungase uhlaselwe nge inganono, namarokhethi namabhomu. I M-2000C ngumuntu okwaziyo ephelele izimpi of DCS World!
F-5E yasungulwa ngu Northrop Corporation 1970s zakuqala. Ukukhanya fighter Tactical iyi inguqulo ethuthukisiwe okusekelwe sangaphambilini F-5A ezenzekayo. Indima combat F-5s 'uhlanganisa air akaphakeme, ukwesekwa emhlabathini, futhi umhlabathi attack. Njengoba sazi umgomo wayo eguquguqukayo, kalula zokusebenzela, futhi izindleko ongaphakeme, Ihlosi II, bese uyaqhubeka ekhonza, umoya amabutho embulungeni yonke.
F-5Е is ayehlome ngezibhamu ezimbili kwaqhuma 20-mm М39-А3 ne 280 uphetha per inganono ngamunye. I kwaqhuma zitholakala esigabeni ekhaleni, phambili abanikeze asebenza nabo. deflectors Special zisetshenziselwa ukugwema izimo compressor kwesibaya okubangelwa hot igesi ukungenisa njengoba bi-umkhiqizo ekuqhutshweni M-39-A3. inganono ngasinye okwazi zokudubula izinga 1500 ukuze 1700 uphetha ngomzuzu.
esihlokweni sephiko ngasinye sihlanganisa kukajantshi Sokuqalisa olukwazi kokudubula AIM-9 imicibisholo evuthayo lefoni-guided.
amaphuzu Five kanzima (owodwa pylon centerline futhi pylons ezine underwing) avumele le ndiza ukuba baphathe izinhlobo ezahlukene air-to-emhlabathini izikhali (amabhomu, cluster Temphi Letitichumane siyiswe, kuqhunyiswa) 6,400 amakhilogremu (mayelana 3000 kg) isiyonke. Ngaphezu kwalokho, okukhanyisa nezinhlamvu wezimpahla iziqukathi kungenziwa bufakwe. Ukuze kwandiswe indiza ubude kanye uhla, yangaphandle uphethiloli amathangi kungenziwa exhunywe amaphuzu amathathu kanzima (a pylon centerline futhi pylons ezimbili inboard). Maneuverability nesivinini kungenziwa kunakekelwa empini by jettisoning zonke izitolo zangaphandle.
F-15 Eagle | Lapho kugcwala isilinganiso
F-15 Sekukaningi Zingu kufike komkhulu wabo US fighter aircraft kusukela 1970s kwaze kwaba sekuqaleni kwekhulu 21st. F-15C kuyinto fighter elihlanzekile nazo ukusebenza ezivelele futhi uye amaphuzu phezu 100 emoyeni-to-air ephathelene nokunqoba kodwa kungenzeki lutho nganoma yisiphi ngokulahlekelwa ukuqinisekisile. I-DCS Flaming Cliffs F-15C kuhlanganisa uchwepheshe model indiza level, imininingwane 6 degrees senkululeko abanikeze asebenza nabo anekhono, olunembile kakhulu imodeli bangaphandle umsindo.
Njengoba isiqu DCS Flaming Cliffs, F-15C igxila lula ukusetshenziswa ngaphandle eziyinkimbinkimbi abanikeze asebenza nabo nokuxhumana, kunciphise yokufunda ijika. Ngenxa yalokho, F-15C izici ikhibhodi induku yokudlala abanikeze asebenza nabo, ekulaya okugxile the mission kakhulu kokugxeka kweningi abanikeze asebenza nabo izinhlelo.
A-10C: 16-2 i-Red Flag
DCS: A-10C Warthog is a PC sekulingisa US uNdunankulu Close Air Support attack izindiza. Lona indiza yesibili DCS chungechunge, okulandelayo DCS: Black Shark, futhi uvusa ibha nakakhulu DCS chungechunge. Warthog kuletha enengqondo kunazo PC sekulingisa ezihleliwe iphiko combat izindiza zanamuhla Mayelana flight Dynamics, Avionics, izinzwa, kanye isikhali izinhlelo.